फनपार्कमा दसैँको रमाइलो (फोटोहरु) access_timeअसोज ३१, २०७८
हिन्दु धर्मावलम्बीको चाड दसैँ यतिबेला धुमधामका साथ मनाइँदैछ । तर यो समय पर्व मनाउने समय मात्र होइन, परिवारको साथमा समय बिताउने पनि समय हो । वर्षभर काममा व्यस्त रहने हुँदा दसैँको बिदाको बेला सबैले आफ्नो परिवारलाई समय दिइरहेका हुन्छन् । आइतबार भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क...
वनमन्त्री रामसहायको जीवन कथा : भैँसी गोठदेखि सिंहदरबारसम्म access_timeअसोज ३१, २०७८
राजनीतिक अस्थिरता झेल्दै आएको नेपालमा कयौँ नेता मन्त्री भइसकेका छन् । पछिल्लो समय संविधानले नै २५ सदस्यीयभन्दा ठुलो मन्त्रिपरिषद् बनाउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअघि सत्ता भागवण्डाका लागि मन्त्रिपरिषद्को आकार पनि निकै ठुलो बनाइन्थ्यो । यसरी मन्त्री बनाइएकाहरु राजनीत...
‘देउवा सरकारप्रति भारतको एकदम सद्भाव पाएँ’ access_timeअसोज ३१, २०७८
नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारप्रति भारतको एकदम सद्भाव रहेको बताएका छन् । काँग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै भारतको पाँच दिने भ्रमण सकेर सोमबार स्वदेश फर्किएका महतले काठमाडौँ–दिल्लीमा भइरहेको बाहिरी च...
पर्वते ठिटोको सफलता : वेटरदेखि कफीघरको मालिकसम्म access_timeअसोज ३१, २०७८
एसएलसी पास गरेपछि सुनौलो भविष्यको कल्पनासहित पर्वतबाट २०६५ सालमा पोखरा झरेका थिए शोभित ठकुरी । पर्वते ठिटोलाई पोखरा नयाँ ठाउँ थिएन । गाउँमा मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएका उनलाई पढाइसँगै काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । मामाघर पोखरामै भएकाले पहिले पनि उनी बेलाबखत...
‘कान्छो न्यायाधीश’ भन्छन्– कानुन र सामाजिक अभ्यासमा बेमेल छ access_timeअसोज ३१, २०७८
जाजरकोट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्य नेपालकै कान्छो न्यायाधीश हुन् । २०३८ सालमा पर्वतको विहादीमा जन्मिएका उनी २०७७ भदौ १ गते जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् । कम उमेरमै न्यायाधीशको भूमिका पाए पनि उनी न्याय सेवामा प्रवेश गरेको ११ वर्ष भइसकेको छ । शाखा...
विदेश मोह त्यागेर स्वदेशमै कालिज पालन access_timeअसोज ३०, २०७८
लामो समय विदेशमा बसेकाहरू नेपाल फर्केर अलि भिन्नै पेसा गर्न रुचाउँछन् । कतिपय आफ्नै पुर्खाले गरेको व्यापार गर्ने त कतिपयले अलि नयाँ ढङ्गले चलिरहेका व्यापार विस्तार गर्ने काम गरेको पाइन्छ । रुपन्देहीमा चाहिँ विदेशबाट फर्केपछि कृषि फर्मअन्तर्गत जमेर कालिज पालन व्यवसाय गर्ने...
अधुरै रह्यो नेपालको सपना access_timeअसोज ३०, २०७८
साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेर नयाँ इतिहास रच्ने नेपालको सपना अधुरै बनेको छ । साफ च्याम्पियनसिपको इतिहासमा पहिलोपटक फाइनलमा पुगेको नेपाली टोली यसअघि सात पटकको विजेता भारतसँग ३–० गोलले पराजित भएको हो । यसअघि दुई टोलीबीच भएका २२ खेलमा भारतले १५ मा...
दसैँ मनाउन गएकाहरु फर्किन थाले काठमाडौँ (फोटोहरु) access_timeअसोज ३०, २०७८
दसैँ बनाउन गाउँ गएका सर्वसाधारण काठमाडौं फर्किन थालेका छन् । शुक्रबार दसैँको टीका ग्रहणसँगै शनिबार काठमाडौं फर्किने क्रम सुरु भएको छ । टीकाको भोलिपल्ट काठमाडौंको कोटेश्वर, कलंकी लगायतका ठाउँमा काठमाडौं फर्किने चहलपहल देखिएको छ । यो वर्ष दसैँ मनाउन १० लाख ...
जीवन ऊर्जा के हो ? access_timeअसोज ३०, २०७८
कुनै पनि सामान, वस्तुलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न वा त्यसको रूप परिवर्तन गर्न शक्तिको आवश्यकता पर्दछ । अव्यक्त तत्त्वलाई व्यक्तिमा ल्याउन पनि शक्ति नै चाहिन्छ । त्यही शक्तिलाई हामी ऊर्जा भन्दछौँ । ब्रह्माण्डमा भएका प्रत्येक वस्तुहरू ऊर्जाले नै बनेका छन् । बालुवाको कण, ढुङ्गा, म...
गोल्यान समूह हाँक्ने तरखरमा तेस्रो पुस्ताका अक्षय access_timeअसोज ३०, २०७८
नेपालमा गोल्यान समूहले आफ्नो व्यवसायको जग हालेको करिब ६० वर्ष भइसक्यो । टेक्सटायल (कपडा उद्योग) बाट व्यवसाय थालेको यो समूहको व्यवसाय जग रियलान्यस स्पिनिङ मिल्स हो । अहिले ऊर्जा, कृषि, बैंक/वित्त, घरजग्गा र आतिथ्यता (हस्पिटालिटी) क्षेत्रसम्म गोल्यान समूहले लगानी विस्तार गरिस...
फाइनल खेलमा अलमुताइरी निलम्बित, भने – नेपालको नतिजाबाट साफ खुसी देखिएन ! access_timeअसोज ३०, २०७८
नेपालका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरी साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेलमा निलम्बित भएका छन् । यसअघिका श्रीलंका र बंगलादेशविरुद्ध चौथो र नवाैँ खेलमा दुईवटा पहेँलो कार्ड पाएको भन्दै अलमुताइरी फाइनल खेलका लागि निलम्बित भएको साफले जनाएको छ । अलमुताइरीले भने साफल...
‘बा र काका उमेरका नेतालाई सम्मानजनक बहिर्गमन गर्नुपर्छ’ access_timeअसोज ३०, २०७८
दसैँअघि मिडियामा एउटा समाचार छ्याप छ्याप्ती भयो– एमाले नेता स्व. भरतमोहन अधिकारीकी छोरी लिमा अधिकारीले एमाले छोडिन् । उनी माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा प्रवेश गरिन् । लिमा अब राजनीतिमा सक्रिय बन्ने । आदि– इत्यादि । लिमा...
नेपालमा थपिँदैछन् रोहिङ्ग्या शरणार्थी, ४१९ जना काठमाडौँमा access_timeअसोज ३०, २०७८
काठमाडौँको कपनस्थित लसुनटारमा जस्ताको टहराले बनेको एउटा टोल छ । सो टोलमा म्यानमारबाट आएका रोहिङ्ग्या शरणार्थी बस्छन् । म्यानमारबाट बंगलादेश हुँदै नेपाल आएका मुस्लिम समुदायका रोहिङ्ग्या लामो समयदेखि त्यहाँ क्याम्प बनाएर बसिरहेका छन् । कपनस्थित राम मन्दिरमा पनि रोहिङ्ग्याको...
तस्बिरमा रेखादेखि अनमोलसम्मको दसैँ टीका access_timeअसोज २९, २०७८
आज विजयादशमी । आजका दिन परिवारमा आफूभन्दा ठूलाबडा, बाजेबज्यै, बाबुआमा, गुरूपुरोहित तथा मान्यजनको हातबाट नवदुर्गा भवानीको टीका, जमरा तथा प्रसाद थापी उनीहरूबाट यश, ऐश्वर्य वृद्धि तथ दीर्घायु प्राप्त होस् भनी आशीर्वाद लिने गरिन्छ । नौदिनसम्म दसैँघरमा दुर्गा भवानीको पूजाआ...
दक्षिणाको महत्त्व : पैसा दिने चलन कहिलेबाट सुरु भयो ? access_timeअसोज २९, २०७८
दक्षिणाको चलन अनादीकालदेखि नै छ । तर, दक्षिणाका रूपमा पैसा दिने चलन सुरु भएको केही दशक मात्रै भएको छ । हिन्दु संस्कृतिमा दक्षिणाको महत्त्व के छ ? दक्षिणाका रुपमा पैसा नै दिनुपर्छ या अन्य सामान पनि दिन सकिन्छ ? कति दिने ? यी र यस्तै विषयमा रातोपाटीले धर्मगुरु तथ...
ब्रह्मायणी जात्राको रौनक, तस्बिरमा हेर्नुहोस् access_timeअसोज २९, २०७८
विजयादशमीको दिन भक्तपुरको च्यामासिंहस्थित ब्रम्हायणी मन्दिरमा ब्रह्मायणी जात्रामा सहभागी हुन भक्तजनहरू बिहानैदेखि मन्दिर परिसरमा पुग्ने गर्दछन्। नवदुर्गाको शक्तिपीठका रूपमा मानिने ब्रह्मायणी मन्दिरमा टीकाको दिन नवदुर्गा प्रकट हुने जनविश्वास छ। व्रत बसेकाहरू बिहान...
उहिलेको दसैँ र अहिलेको दसैँ ! access_timeअसोज २९, २०७८
नेपालका मौलिक पर्व, परम्परा र चाडहरुका विषयमा जति प्रचार प्रसार हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । दसैँ, तिहार होस् वा इन्द्रजात्रा, यी पर्वहरुको इतिहास हजारौं वर्षको छ । त्यसैले उचित प्रचार गर्न सके, पर्यटक बढ्छन्, आर्थिकरुपमा पनि फाइदै हुन्छ । हरेक पर्वको आफ्नै महत्व ...
दसैँमा जसपा–लोसपालाई कार्यकर्ता तान्नै चटारो access_timeअसोज २८, २०७८
दसैँको आज नवौँ दिन । काठमाडौँलगायत देशका मुख्य सहरहरू सुनसान भइसकेका छन् भने गाउँघरमा चहलपहल बढेको छ । हरेक तप्काका मानिसहरु आ–आफ्नो कर्मभूमि छाडेर जन्मभूमि फर्केका छन् । त्यसको सबभन्दा बढी फाइदा राजनीतिक दलहरूले लिइरहेका छन् । अहिले नेताहरू आफ्नो ...
बडादसैँ भूमिपुत्रहरूको चाड हो access_timeअसोज २८, २०७८
बडादसैँ शक्ति उपासनाको पर्व हो । प्रकृति उपासनाको पर्व हो । विविध भाषा र संस्कृति भएको हाम्रो कृषिप्रधान देशमा यसको महत्त्व विशेष छ । भौगोलिक रूपमा हिमाली क्षेत्रमा जमरा राखिँदैन, टीका लगाइँदैन । उनीहरूले दसैँ नमनाए पनि शक्तिमा विश्वास गर्छन्, उपासना गर्छन् । पहाडमा दु...
नमस्ते भर्सेस् एनसेल : चाडबाड विशेष अफरमा प्रतिस्पर्धा access_timeअसोज २८, २०७८
हरेक वर्ष दसैँ, तिहार तथा छठजस्ता पर्वलक्षित अफर ल्याउन नेपालका दुई ठुला दूरसञ्चार (टेलिकम्युनिकेशन) सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र आजियाटाबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । नेपाल टेलिकमले नमस्ते र अजियाटाले एनसेल ब्राण्ड नाममा सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । यो ...
दसैँमा हेर्नका लागि युट्युबमा उपलब्ध नेपाली चलचित्र access_timeअसोज २८, २०७८
दसैँमा कहाँ जाने ? समय कसरी बिताउने होला ? यस्तै चिन्तामा हुनुहुन्छ भन्ने भने तपाईंको लागि उपयुक्त माध्यम घरमै बसेर फिल्मबाहेक अर्को विकल्प के होला र । फिल्म हेर्न युट्युब जति सजिलो माध्यम अर्को छैन । त्यसका लागि युट्युबमा के कस्ता फिल्म छन् भन्ने चाहिँ जानकारी नहुन पनि स...
महानवमीमा मात्र खुल्ने तलेजु भवानी मन्दिरमा बिहान ४ बजेदेखि नै भक्तजनको लाम (फोटोहरु) access_timeअसोज २८, २०७८
महानवमीका दिनमात्र खुल्ने हनुमानढोका दरबारस्थित तलेजु भवानी मन्दिरमा पूजा, आराधना एवं दर्शन गर्न बिहान ४ बजेदेखि नै भक्तजनको लाम लागेको छ । तलेजु भवानी मन्दिर वर्षमा एक दिन आज मात्र भक्तजनका लागि खुला गरिन्छ । गत वर्ष भने कोरोना महमारीका कारण मन्दिर भक्तजनका...